Rio de Janeiro - I LOVE RIO- IBHIZINISI
Azi ukubaluleka elandayo Rio de Janeiro ezimakethe zomhlaba, I LOVE Rio inikeza uhlu olubanzi ulwazi the umnotho wedolobha, ezifanele ibhizinisi abantu, osomabhizinisi kanye zezomnotho.
Imibono ewusizo sendlela yokuqhuba ibhizinisi kanye ukubandakanya nesiko emakethe yendawo anikezwa, kokubili ukuba baziqonde kanye nokuqwashisa. Eqokomisa nezimboni wanda futhi amabhizinisi, kanye nabo lobuchwepheshe kanye ewusizo bazibandakanye amabhizinisi endawo nokuthuthukisa imizamo yimpumelelo. Ukuxhuma abafundi ngqo izikhungo kanye nezinkampani, le website futhi ikhuthaza ukuhweba kanye nentuthuko wendawo.
The iminotho Brazil kanye Rio de Janeiro waqina eminyakeni eyishumi edlule: ezintsha izinqubomgomo macroeconomic, ukutholakala ezengeziwe kwemithombo yemvelo guqula okuphawulekayo zezenhlalo ziye zasiza ukwanda letfunyelwa futhi presents Brazil njengekusasa ukuphela ekhangayo.
Amasu for the ngcono kwezindawo ampofu, basekela ezinkampanini ezizimele kanye imizamo izigidigidi eziningana ukuze kuthuthukiswe ingqalasizinda jikelele ezifana zokuxhumana kanye zokuthutha ziphezulu ajenda ye federal, isimo futhi lendawo - kuphumele Kwisimo sezomnotho Dynamic edonsa zimali omhlaba kanye ukulibona kwezentengiselwano.
Ejensi Uhulumeni ubeke imali enkulu eyayingakaze ibonwe ukuze kuthuthukiswe ingqalasizinda futhi izindawo ezweni lonke, ukubeka esiteji sabasebenzi emikhulu, futhi ematfuba lamanyenti utshalomali esikhathini esizayo.
Uhulumeni Brazilian uye kahle Brazil njengoba umholi global, besiza emazweni angomakhelwane, ekhuluma ukuthula United Nations, kanye ngokubambisana namazwe Afrika kanye namazwe South American ukuthuthukisa ingqalasizinda kanye ukubambisana.
Rio de Janeiro yilona dolobha yemasiko Brazil kanye omunye izikhungo zezimali main, ukuyothenga nezinto zokuhamba. Ngemuva São Paulo, Rio de Janeiro yiyona idolobha Brazilian yesibili esiphezulu gross womkhiqizo wakuleli, kulinganiselwa ngaso mayelana billion 150 reais ngonyaka. The namaphethelo singesesibili ngobukhulu kazwelonke ingcebo pole, futhi 70% of amandla kwezomnotho isimo Rio de Janeiro.
Ukuziqhayisa ukuba enhlokodolobha yase Brazil 1960, cishe 200 edlule, Rio uye savela ibe nezokuphatha, ezezimali, ezokuhweba kanye namasiko isikhungo ukhombise impilo.
Umuzi siyikhaya ingqalasizinda obuqinile itheku elikhulu, isikhumulo sezindiza zamazwe ngamazwe, sezindiza ezifuywayo, imigqa emibili esitimeleni, eziningana ahamba ojantshi besitimela, futhi inethiwekhi kwezokuthutha amakhulu ibhasi imigqa nezinkulungwane ibhasi.
Rio siyikhaya amafemu zezimali ezinkulu, ukuxhumana kanye ezizimele kanye nesimo bezijabulisa. Ukutholakala kwakamuva namafutha Campos Basin in Rio wazibonakalisa base main of zikawoyela eziningana, igesi namandla Brazilian angaphandle, eqinisweni, pre-usawoti esifundeni eBrazil, indawo elikhulu reserves amanzi ezijulile amafutha ngaphansi ungqimba obukhulu of usawoti, ingagcina kuze imiphongolo billion 100 - esihlinzeka nesidingo esikhulu sezindawo amasevisi e Rio.
Umuzi kuyinto ibhizinisi futhi yasebhange izindawo ezibalulekile, imisebenzi ukutshalwa Rio de Janeiro ebandakanya ukuthuthukiswa ingcebo, fund ukuphathwa, futhi emakethe ngobukhulu stock in Brazil. Wadala e 1845, Rio de Janeiro Stock Exchange kwaba amasheya lokuqala wawuyomiswa eBrazil, bayadayisa namuhla kuphela ezimalini zikahulumeni
Umuzi ine nezimboni shipbuilding, yokusansimbi, yokucwenga, igesi kanye petrochemicals, imithi, izindwangu, processing ukudla futhi ifenisha. Ngaphezu kwalokho, izinhlangano main waseBrazil zokuzijabulisa, ithelevishini, ukunyathelisa ukuhlinzwa kule metropolitanana esifundeni.
Ukuba khona itheku enkulu uye wenza Rio isikhungo esibalulekile of international Import and Export nemisebenzi kanye ukuhweba ezisogwini nezinye izindawo Brazil kanye eNingizimu Melika.
Amanye ukuzijabulisa kukhona izici eziyinhloko kwezomnotho e Rio, njengoba umuzi a zamazwe izivakashi Brazilian angaphandle kanye lungaba kwezokuvakasha kwabamazwe ngamazwe njalo elokhu ivela. Umuzi kulindeleke ukuba sikhule kakhulu kule ndawo, ngokwengxenye ngenxa yokunamathela izenzakalo ezinkulu zamazwe ngamazwe like the World Cup 2014 kanye Olympics ngo 2016, lapho waletha nokungena kwezimali, inqwaba amahhotela amasha, futhi lungaba emakethe evulekile ukunwetshwa.
Ugu Rio de Janeiro enye ezokuvakasha eziqine kanye nezimakethe kwezomnotho emhlabeni, ubuye iyindawo ethandwa kakhulu iningi million 50 amaBrazilians izivakashi iholidi kuzwelonke ngonyaka ngamunye.
Ngokomlando, emkhakheni service bekulokhu kuyingxenye ebaluleke kakhulu emnothweni of Rio de Janeiro, futhi kanye ibhizinisi elincane egcina idolobha elichumayo unyaka wonke. Izinkulungwane ezinkulu kanye nezincane izinkampani, izimboni kanye yezohwebo ukudla, izingubo, zikagesi, ifenisha, ugwayi, lesikhumba izimpahla, ubucwebe, ubuciko kanye yezandla. Muva nje, ukwakhiwa of electronics kanye computer waqala ukudlala indima kunamandla emnothweni.
Kukhona izinkampani kuka 200,000 ezibhalisiwe e Rio, ukunikela eziningi imikhiqizo ehlukene kanye namasevisi. Iningi lalaba izinkampani ezincane nezincane, kanye nabasebenzi babengaphansi kuka-100. Service imikhakha kanye nemikhuba yekuphatsa kuhulumende,-akhawunti engaphezu kwengu-70% azo zonke imisebenzi emzini, ukuhweba akhawunti eduze 16%, 10% 5% embonini yezokwakha.
Rio de Janeiro has emhlabeni 24,000 amabhizinisi yezimboni imisebenzi abantu abangaphezu kuka 800.000. An umnotho ukwandiswa olukhudlwana in the class phakathi ziye zenza isidingo ochwepheshe young imfundo ephakeme, ngokuguqula umuzi ezweni elisha of ithuba. Brand Brazilian samanje imindeni eNingizimu Melika, amatasa wanda ezimakethe global, kanye Rio de Janeiro futhi Sao Paulo enhliziyweni yalokhu kwanda.
Ezicini evumayo for the utshalomali zamanje Rio zihlanganisa ukunwetshwa emakethe zangaphakathi kanye kwesidzingo semphahla, ukutshalwa kwezimali ukuphepha komphakathi, high quality marketing kanye umcimbi ezisekelweni kanye nokutholakala ithalente lasekhaya.
The labantu Rio de Janeiro nxazonke 6.4 million abantu, lafinyelela cishe 12 million abantu edolobheni imakethe umthengi elikhulu livela nalapho kwezigidi ezingu-1.6 bokufika vakashela Rio minyaka yonke.
Ochwepheshe babikezela ukuthi kuyoba izimali uwoyela negesi mkhakha R $ 488 billion in Brazil phakathi 2014 kanye 2017, futhi iningi lokhu bagxila Rio de Janeiro, esesikhundleni 80% of imithombo yezwe.
Rio unikeza Igumbi amathuba okukhula namabhizinisi ezuzisayo emkhakheni shipbuilding, ingqalasizinda yomgwaqo, amachweba, zezindiza, ezokuxhumana kanye nezokuvakasha. Umuzi ungumnikazi lesithathu ngobukhulu port wesifunda kanye zokuthutha kuleli lizwe, kanye nokutshalwa ezinkulu ziyaqhubeka sokuvuselela kanye ukunwetshwa.
The labantu okhulayo kanye nengqalasizinda ngcono emijondolo, kanye ukwanda engenayo labantu, ahehe more futhi ukuhweba lingayi ezindaweni ezingabalulekile isakhula Rio de Janeiro. Lokhu deal entsha kuqinisa iminotho imiphakathi yendawo, kanye nokukhula engenayo ebonakalayo futhi izinga lempilo lezakhamuzi. Studies kanye nedatha ubonise ukuthi ukukhula kwesidingo yakha amathuba amaningi ukuba sandise yohwebo ukuhlangabezana nezidingo zendawo.
The nesithakazelo exponentially likhula futhi nokuzibophezela inkampani, kwaba wahlangana umzamo omkhulu yohulumeni nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni ukuze anakekele futhi ukusekela ukuthuthukiswa komnotho wendawo emijondolo, bebona ukukhula yayo ezingadala a Rio kunamandla futhi united more. Izingqungquthela, workshops kanye nezinkulumo njalo sabamba ukukhuthaza kwezamabhizinisi futhi kwelekelelwe emabhizimisi ekhona.
O Serviço Brasileiro de Apoio como micro e Pequenas Empresas (Service Brazilian kute kwelekelelwe emabhizimisi lamancane), noma Sebrae, bagqugquzela ukuthuthukiswa izinkampani wendawo emiphakathini thulisa kusukela 1996. Ngo-2011, wazakhela project ukusekela ngaphezu 60,000 osomabhizinisi ngemihlangano kanye nokunikeza izeluleko nokuqeqeshwa okubhekiswe.
The idumela kanye commercial nalabo abangase babe Rio uye wajabulela isimo ukukhula okuqhubekayo, futhi njengoba enjalo, indawo kumnandi komuzi uba ayizidleke abathengi, abakhiqizi futhi ochwepheshe ukuba balolonge landscape international ensimini yakho.
Uma sicabanga isithakazelo esikhulayo lekusisa, Rio de Janeiro inezinhlobo eziningi SMME ehlonishwa futhi emikhulu lapho abathengi kanye nabakhiqizi ukwabelana ngemibono, enethiwekhi ukusungula. Umuzi ine a fair nezinkomfa Amafutha kanye negesi biennial ne iqhaza kuka 1,500, eyayihlelwe Institute of Petroleum and Gas, futhi ukujabulisa wonyaka, Navalshore international.
An fair ebalulekile imikhiqizo amavithamini kanye amaprotheni, enye izingubo kanye yezemidlalo ukukhuluma emakethe eqinile imikhiqizo ehlobene nezempilo kanye imfanelo. Ngesikhathi esifanayo, imboni yezemfashini in Rio ebelilokhu ngobuningi nedumela eminyakeni embalwa esidlule, umuzi manje kunabantu ezihlukahlukene izenzakalo futhi fashion imibukiso.
Uma sicabanga kwemvelo ashukumisayo kokutshalwa global, Rio de Janeiro Kuqhutshwa eziningi SMME ehlonishwa futhi yesigodi okukhona kuyo inethiwekhi ye abathengi kanye nabakhiqizi ukwabelana imibono kanye namathuba.
Phakathi kwazo kunane ingqungquthela biennial of amafutha ababambiqhaza kuka 1,500, kanye ezihlukahlukene ezimbonini, imibuthano yezohwebo futhi fashion. Zonke lezi kuyadalulwa ngokuningiliziwe, side izenzakalo wokukhangisa kwezamabhizinisi futhi ibhizinisi imisebenzi kuzo zonke izindawo edolobheni futhi isimo.
Izinhlelo Kanye Emisebenzi